Vaovao - Ahoana ny fomba fanadiovana torolàlana môtô tsikelikely?
Ahoana ny fomba fanadiovana torolàlana môtô tsikelikely?
Atolory servieta lehibe na lamba landy malefaka hatrany ny ampinga. Ny lamba famaohana dia tsy maintsy alemana rano ary apetraka amin'ny ampinga mandritra ny 5 minitra farafahakeliny mba hanalefaka ny zavatra. Esory ny lamba famaohana ary apetaho eo ambonin'ilay ampinga ny rano rehefa manosika moramora ny fako midina sy miala amin'ny tananao ianao. Tazomy ny hazavana fanerena mba tsy hanoratanao ny tampony. Ny tsara indrindra dia ny mitazona an'io lamba famaohana io raha tsy amin'ny presoaking fotsiny. Tsy tokony hampiasaina amin'ny sehatra hafa amin'ny fikojakojana fitaratra noho ny fahalotoan'ny loto sy ny fako. Sasao tsy tapaka ny lamba famaohana mando.
Fanadiovana farany sy fitsaboana
Raha vantany vao afaka amin'ny tsinainy sy ny loto rehetra ny efijery, tonga ny fotoana anaovanao ny fanadiovana farany & fitsaboana anao. Ity fitsaboana farany ity dia mazàna manomboka amin'ny savoka maivana na sarimihetsika sarimihetsika amin'ny efijery madio hanaparitahana ny rano sy hanamorana ny fanesorana ny bibikely, ny loto ary ny fako amin'ny fanadiovana amin'ny ho avy.
Fotoana fandefasana: Mey-25-2020
Vokatra asongadina - Sitemap Pedalin'ny gazy moto, Tongotra môtô fisaka, Kitapo ho an'ny sekolin'i Kawasaki, Vespa Gts 300 Gtv fitoeran-kitapo, Vespa Gts Gtv 300 Atraketraky ny kitapo, Windshield an'ny Honda Nmax,